I-Litany yeRosari eNgcwele Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Enye yezona zithethe zibalulekileyo kuwo onke amaKatolika alungileyo kwaye akholelwa kwinkolo yile ubuncinci be Ingcwele yeRosari. Namhlanje siza kukuxelela yonke into enxulumene nabo.
1 Yintoni ilitha yeRosari eNgcwele?
2 Imbali yeeNkcukacha zeRosari eNgcwele
3 Izinto zeelitani zerosari engcwele
3.2 Intombi enyulu
3.5 ISanta María
3.6 Ezinye izinto
Yintoni ilitha yeRosari eNgcwele?
Le mithandazo ikwabizwa ngokuba ziiLavantaas zeLitani ziyimfuneko yokuncedisa ukwenza imeko yokomoya, kunye nokunikezelwa kwimigaqo esekwe eBhayibhileni. Iilitani ziyinxalenye yegama elivela kwigama lesiGrike, elithetha ukuthandaza, ukuthandaza.
Zimelwe ngokudumisa ngendlela enocwangco, amabinzana acwangcisiwe ajolise ekuceleni umthandazo kuThixo nakwiNtombi Enyulu. Izihloko zeetani zeRosari eNgcwele zenziwe ngembeko yeNtombikazi enguMariya; Banikwe iminyaka ngeminyaka ngumzali ngamnye, uPopu, kunye nabameli beCawa.
Imbali yeeNkcukacha zeRosari eNgcwele
Zazisetyenziswa kwiminyaka yokuqala yokuqala kweCawe. Ekuqaleni babebhalelwe abangcwele, ezona zibalulekileyo ziifowuni zamaLuthere. Ezi zenziwe ngembeko yeNtombikazi enguMariya, zezona zidume kakhulu kwaye zisetyenziswa kakhulu ngabantu abathembekileyo nabameli babefundisi.
Iinkonzo zamaLuthere zivela kuMgaqo-siseko wooPapa abaphezulu ababewusebenzisa okokuqala malunga nonyaka we-1500, ze emva koko zamkelwa ziziphathamandla zecawa yexesha labo. Iilitha zokuqala zazinikezelwe kuMama oyiNgcwele, zichazwe ngenkulungwane ye-XNUMX Mainz codex kwaye zinesihloko esithi "Litany of Domina Nostra Dei genitrice Virginia Maria. Ora valde bona, yonke imihla pro quacumque Tribe dicenda est ”. Ezi zibandakanya iindumiso ezininzi kunye nokuphindaphinda "iSanta Maria."
Kungatshiwo ke, ukuba ezi Marian okanye ii-Lutheran litani kamva zaba yinxalenye yeeLiteni zeRosari eNgcwele, zaye zaduma ngexesha le-XNUMXth kunye nele-XNUMX leminyaka, kwaye khange zitshintshwe ukususela ngelo xesha ukuza kuthi ga namhlanje.
Izinto zeelitani zerosari engcwele
Ulwakhiwo ezenziwa ngalo iirosari ezingcwele ziyongezwa ngokubonisa kunye nokucela kumama kaKrestu, kodwa ikwabandakanya nezinye izinto, masibone:
Eli gama lisetyenziselwa ukuqaphela umama kaKrestu, kwaye nakwizibhalo ezingcwele sinako ukubona inkcazo ngqo; kumaKatolika ngumama wawo onke amakholwa amelwe ngumpostile uYohane owamamkela kuYesu emnqamlezweni:
"Uyabona, uya kuthabatha esizalweni, uzale unyana, umthiye igama elinguYesu ”(Luka 1:27).
Yini na ukuba ndinikwe lento, yokuba unina weNkosi yam eze kum? (ULuka 1:43)
Y ewe, ungunina wabo bonke abakholwayo abamele umpostile uYohane, abamamkeleyo kuYesu emnqamlezweni. (UYohane 19, 25-27).
Xa iNtombikazi ibizwa ngegama, isithembiso esinikwe nguThixo sinikwa, sichaza imeko kamama, ebhayibhelini ichazwa ngale ndlela ilandelayo; Isithembiso esikhulu sikaThixo siyazaliseka:
"INkosi iya kuninika umqondiso: uyabona, intombi le iya kumitha izale unyana, imthiye igama elinguImanuweli. (Isaya 7:14)
Unina kaYesu ungcwele kuba uzele lubabalo, kwaye kungekuphela ngamazwi athethwe yingelosi ethunyelwe nguThixo, kwizibhalo kuyamiselwa:
Kwaye ukungena, wathi: "Vuyani, uzele lubabalo, INkosi inawe." (Luka 1, 28)
Xa kusithiwa "Gcwele lubabalo" luhlobo lokuguqulelwa kolwimi lwesiGrike "Kejaritomene" elithetha "Ukuzaliseka koBabalo". Intombi enyulu kukuzaliseka kobabalo, iyabuthwala kwaye ilubabalo lweNkosi yethu uYesu Krestu.
Ukuba ngumama wabo bonke, kwii-litania ze-rosari engcwele, umama uceliwe ukuba asithandazele asithandazele, abantwana bakhe, njengoko wenzayo kumtshato waseKana. unyana wakhe. Namhlanje ukudityaniswa kuThixo kukuhlala kuthanda bonke abantwana bakhe. Siyakumema ukuba ubone Umthandazo wemizuzu emihlanu.
Intombi enyulu iyahlonitshwa kwaye isikelelwe, izele lubabalo kwaye iyaziwa malunga nayo kwizibhalo, okoko ithathwa njengomama kaKrestu, ingcwele evumela wonke umntu ukuba anike uvuyo kwezi litani.
Usikelelwe phakathi kwabafazi bonke; sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho. (ULuka 1:42).
Ngaphakathi kwiitempile zeRosari eNgcwele sinokufumana amahlelo kwiNtombikazi enguMariya njengenxalenye yazo zonke iimeko ezenza ukuba ikhetheke. Singabona ke ukuba kwiilitani zamagama angcwele eRosari zisetyenziselwa umama ngolu hlobo lulandelayo:
Umama Ongcwele kaThixo.
Intombikazi eNgcwele yeNtombi
Umama kaYesu Kristu.
Umama wobabalo lukaThixo.
Oyena Mama unyulu.
Umama ucocekile okanye akagqibekanga.
Umama weengcebiso ezilungileyo.
Intombi eNyanisekileyo Inengqiqo.
Intombi eNenceba (kwaye inenceba).
Unobangela wovuyo lwethu.
Indawo yokubalekela yaboni.
Ukumkanikazi weengelosi, abaProfeti, oosolusapho, njl.
Sele sizibonile ezinye izinto ze-Rosary eNgcwele, isiqinisekiso sayo kumabinzana, isekwe kwimithandazo nakwindumiso kwiNtombikazi, eyenza phantse wonke umxholo obalulekileyo, uhlala usekwe kwizibhalo. Nangona kunjalo, izibongozo zokuqala azibhekiswa kuMama oyiNgcwele, kodwa kunoko kwiNkosi yethu uYesu Kristu noBathathu Emnye oyiNgcwele.
Luhlobo lwentshayelelo, apho kamva la mabandla mathathu alandelayo apho kulandelwa igama leNtombi Enyulu, iSanta María, kunye nelona lungelo libalulekileyo: uMama kaThixo kunye neNtombi Enyulu yeentombi. Emva koko, izibongozo ziqala zahlulwe zangamaqela aliqela:
Izibongozo ezili-13 zokuhlonipha ukuba ngumama kweNkosikazi yethu
Izibongozo ezi-6 zokuhlonipha ubuntombi bakhe
Izibongozo ezili-13 ezingumfuziselo
Ukucela inceba yakhe
Izibongozo ezili-12 zikaMariya njengoKumkanikazi
Ngayinye yezi zinto inexabiso elinamandla lokomoya apho zichazwe khona njengoko sibonile kuthelekiso lwezinto kunye nokukhankanywa ngokuthe ngqo kwintombi enyulu.